Cinwaan qoraal ah oo taariikh leh: Helvetica | Abuurista khadka tooska ah
Mid ka mid ah qoraalada adduunka ugu waxtar badan uguna isticmaalka badan waa Helvetica, isha laga helo palo seco iyada oo aan la dhammayn ama sidoo kale loo yaqaan nooc la’aan. Waxaa la abuuray badhtamihii qarnigii 1957-aad, gaar ahaan XNUMX-kii magaalada Basel (Switzerland) ee naqshadeeye Max Miedinger waxaa wakiishay Edouard Hoffmann oo ka tirsan shirkadda Hass Foundry.
Waxaa loogu talagalay iyada oo ku saleysan qoraalada horey u jirtay waqtigeeda oo loo yaqaan Akzidenz Grotesk oo la abuuray 1896.
Magacaaga, Helvetica, wuxuu ka yimid tixraaca suugaaneed ee "Swiss" ee magaca Laatiinka, in kastoo markii hore loogu yeeri jiray Neue Haas Grotesk ilaa Stempel Foundry uu helay xuquuqda isla markaana u beddelay magaceeda kan hadda.
Sannadkii 1983-kii, Linotype iyo Stempel Foundry ayaa tan dib u qaabeeyay suugaanta qoraalka abuurista ballacyo cusub iyo culeysyo hadda ka sii sarreeya oo loogu yeero Neue Helvetica.
Lixdameeyadii caankeeda iyo isticmaalkeedu si gaar ah bey u kordheen, taas oo ahayd tan ugu badan ee loo adeegsado sawirada sumadaha shirkadaha sanadihii 60 iyo 70, gaar ahaan dalka Switzerland. Waxay u gudubtay inay noqoto isha loo isticmaalo inta badan boodhadh magaalo iyo calaamado ku faafay caasimadaha waaweyn ee adduunka intiisa kale.
Waqtigan xaadirka ah waa shirkadda Linotype midka masuulka ka ah rukhsadaha qoyska Helvetica iyo dhammaan noocyada kala duwan ee tan soo ifbaxay tan iyo markii la abuuray.
sawirro: aqoonsi, wikipedia, tag
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Font leh taariikh: Helvetica